N'okpuru Nlekọta: Onye M hụrụ n'Anya na M - ysmụ nwoke Lovehụnanya - Bl - Bl Manga - Bl Webtoon - Yaoi - Yaoi Manga - Yaoi Hentai
N'okpuru Nlekọta: Onye M Hụrụ n'Anya na M nkezi 3.6 / 5 si 18
NA / A, o nwere ihe nlere 65.6K
Comedy, Ecchi, Harem, tozuru okè, romance, seinen, Akwụkwọ ntanetị
Junhee bụ onye na-ebugharị ebugharị ma nweela ụzọ jikwa ego ya niile. N'ikpeazụ, ọ na-ahụ nnukwu egwuregwu oge, mana ọ bụ naanị ụmụ nwanyị! N'ịbụ ndị nwere mkpa ego, ọ na-eji ejiji dị ka nwa agbọghọ naanị iji chọpụta ọrụ ọ na-achọ maka ya bụ ikpe gbasara ahụike na ọgwụ libido maka ụmụ nwanyị. Ọ bụghị naanị na ya na ụmụ nwanyị ise ndị ọzọ (ahem, agụụ mmekọ) kpọchiri akpọchi otu izu, ha niile bụ ụmụ nwanyị si ụlọ akwụkwọ sekọndrị ya! Ogologo oge ole tupu onye ọ bụla achọpụta na ọ bụghị ya?
Chapter 40 Nwere ike 14, 2021
Chapter 38 Nwere ike 14, 2021
Chapter 37 Nwere ike 14, 2021
Chapter 36 Nwere ike 14, 2021
Chapter 35 Nwere ike 14, 2021
Chapter 33 Nwere ike 14, 2021
Chapter 32 Nwere ike 14, 2021
Chapter 31 Nwere ike 14, 2021
Chapter 30 Nwere ike 14, 2021
Chapter 29 Nwere ike 14, 2021
Chapter 28 Nwere ike 14, 2021
Chapter 26 Nwere ike 14, 2021
Chapter 25 Nwere ike 14, 2021
Chapter 24 Nwere ike 14, 2021
Chapter 23 Nwere ike 14, 2021
Chapter 22 Nwere ike 14, 2021
Chapter 21 Nwere ike 14, 2021
Chapter 19 Nwere ike 14, 2021
Chapter 18 Nwere ike 14, 2021
Chapter 17 Nwere ike 14, 2021
Chapter 16 Nwere ike 14, 2021
Chapter 15 Nwere ike 14, 2021
Chapter 14 Nwere ike 14, 2021
Chapter 13 Nwere ike 14, 2021
Chapter 12 Nwere ike 14, 2021
Chapter 11 Nwere ike 14, 2021
Nsogbu nke onyeisi m
Ebighebi Nke Gi